कुकुरहरूका लागि मुखौटा: कुकुरहरूका लागि पाँच तरिकाहरू K9 मास्कले तपाईंको कुकुरलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ - राम्रो एयर टोली द्वारा K9 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > कुकुरहरूका लागि K9 मास्क Five तरीकाले तपाईंको कुकुरलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ
दुर्भाग्यवस, वायु प्रदूषण हाम्रो वरिपरि छ - धुलो, धुवाँ, र धुवाँले हाम्रो र हाम्रा प्यारे साथीहरूको लागि समस्या सिर्जना गर्दैछ। हुनसक्छ तपाईंले वायु प्रदूषणको बारेमा तपाईंको कुकुरलाई असर गर्ने बारेमा सोच्नुभएको छैन, तर तिनीहरू हामीले हावामा उडाई लैजान्छन्। जब तपाईंलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, वा आफूलाई खँसी र सामान्यभन्दा बढि छींक लाग्दा, तपाईंको कुकुर पनि प्रभावित हुन्छ।
त्यहाँ यसको बारेमा तपाइँले गर्न सक्ने केहि छ। K9 मास्कीको आजको ब्लगमा हामी पाँचवटा विभिन्न तरिकाहरूमा छलफल गर्न चाहन्छौं जुन हाम्रो मास्कले कुकुरहरूलाई प्रदूषण कणहरू र एलर्जेनहरू फिल्टर गरेर मद्दत गर्न सक्छ। थप जान्नको लागि पढिरहनुहोस्, र यदि तपाईं आफ्नो घरपालुवा पशुहरूको सुरक्षाको बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, K9 Mask® आज किनमेल गर्नुहोस्!
विषाक्त हवाका खतराहरू सबै हाम्रो वरिपरि छन्। तपाईंको अवस्थामा निर्भर गर्दै, तिनीहरूमध्ये केही हडपड सहरमा हजारौं सवारी साधनहरूको उत्सर्जनको साथ बाँचिरहेका परिणामहरू हुन सक्छन्। अन्य परिस्थितिहरूमा आगो र ज्वालामुखी जस्ता ठूला पर्यावरणीय घटनाहरूको कारण वायुको खतरा हो। अब, तपाइँ आफ्नो विशेष साथीलाई मास्कको साथ सुरक्षा गर्न सक्नुहुनेछ जुन उनीहरूका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो। निम्नलिखित केहि तरिकाहरू छन् K9 मास्कीले तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई रक्षा गर्दछ।
सबैभन्दा सानो कणहरू फिल्टर गर्नुहोस्
हाम्रो K9 मास्कले एक PM 2.5 फिल्टर प्रयोग गर्दछ। यसको मतलब सबैभन्दा सानो विषाक्त कणहरू हावाबाट बाहिर फिल्टर गरिएका छन्। वास्तवमा, २. ले साइजलाई जनाउँछ र अक्षरहरू प्रधानमन्त्रीले "कण पदार्थ" लाई जनाउँछ। कुकुरहरूको लागि हाम्रो हावा फिल्टर मास्कहरूको मामलामा, पीएम २. means यसको अर्थ हाम्रो मास्कले कणहरू फिल्टर गर्दछ जुन चौडाइमा २. mic माइक्रोमिटरभन्दा ठूलो छ। २. mic माइक्रोमिटर कति ठुलो छ? EPA अनुसार, यो औसत मानव कपाल भन्दा करीव times० गुणा ठूलो छ।
सबैभन्दा सानो कणको%%% फिल्टर गर्दछ
कुकुरहरूको लागि हाम्रो हावा प्रदूषण मास्कले मात्र केहि साना साना वायुजनित कणहरू फिल्टर गर्न मद्दत गर्दैन, तर तिनीहरू त्यसो गर्न पनि धेरै प्रभावकारी छन्। हामीले प्रयोग गर्ने फिल्टरहरूले एफडीए, सीडीसी, र व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रिय संस्थान (NIOSH) द्वारा स्थापित N95 रेटिंग मापदण्ड पूरा गर्दछ। यसको मतलब यो हुन्छ कि जब तपाईंको कुकुरले K9 मास्की लगाउँदछ, non%% सम्म सबै गैर-तेल आधारित कण एयर सामग्रीलाई फिल्टर गरिनेछ। त्यो एउटा सानो मास्कमा धेरै सुरक्षा हो!
तपाईंको कुकुरलाई सुरक्षाको एक थप तहको रूपमा, हाम्रो मास्कले सक्रिय कार्बन फिल्टर पनि समावेश गर्दछ। सक्रिय कार्बन वातावरणबाट हानिकारक रसायनहरू फिल्टर गर्न प्रयोग गरिने सामग्री हो। यो कालो, कार्बन युक्त ग्रान्युलहरू मिलेर बनेको छ कि यसले दूषित पदार्थहरू तिनीहरूको पासोमा पार्छ। फिल्टरिंग कम्पोनेन्टको बहु प्रकारहरू प्रयोग गर्ने मास्क लगाउने फाइदा यो हो कि यसले विभिन्न प्रकारका दूषित पदार्थहरू हटाउनेछ, र उनीहरूको ठूलो मात्रा। को सम्बन्धमा सक्रिय कार्बन, यो फिल्टरिंग सामग्री हानिकारक, विषालु ग्याँसहरू शोषकमा विशेष गरी राम्रो छ जुन N95 फिल्टरहरूले क्याप्चर गर्न सक्षम नहुन सक्छ।
प्यान्टि Ex निकास भल्भ
कुकुरहरूले पेन्टि through मार्फत तातो रिलीज गर्छन्, त्यसैले तपाईं कुकुरको मुखमा केहि राख्न चाहनुहुन्न कि उनीहरूलाई त्यसो गर्न प्रभावकारी हुनबाट रोक्छ। यदि तपाईंले आफ्नो कुकुरको मुखमा अर्को प्रकारको कभर covering राख्ने कोशिश गर्नुभयो भने, त्यहाँ एक सम्भावना हुन्छ कि ऊ गरम हुन सक्छ वा पर्याप्त अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्दैन। जहाँसम्म, K9 मास्कीको साथ, हामीले यसको स्मार्ट डिजाइनको एक अंशको रूपमा पेन्टि exha एक्स्लेभ भ्भलभ समावेश गरेका छौं। यसले कुकुरहरुलाई प्राकृतिक गर्न के गर्न अनुमति दिन्छ उनीहरूलाई शान्त राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ जबकि अझै उनीहरूलाई खतरनाक वातावरणीय अवस्थाबाट बचाउँछ।
यद्यपि तपाईंको कुकुरको हावा फिल्टर प्रक्रिया मास्कमा परावर्तक प्यानलहरू सामान्य, महत्वहीन विवरण जस्तो देखिएला, तर यो देखाउँदछ कि हामीले तपाईंको कुकुरलाई सुरक्षित राख्नको लागि प्रत्येक सम्भावित तरिकाहरूको बारेमा सोच्न कोशिश गरेका छौं। यदि तपाईं र तपाईंको घरपालुवा जनावर रातमा हुने स crisis्कटमा सामेल छन्, वा तपाईंले शक्ति गुमाउनु भयो भने, तपाईं आफ्नो कुकुरलाई सजिलैसँग ट्र्याक राख्न सक्षम हुनुहुनेछ, अत्यन्तै हल्का हल्का वातावरणमा पनि।
तपाईंको कुकुरलाई K9 मास्काको साथ सुरक्षित राख्नुहोस्
K9 Mask® संसारको पहिलो वायु प्रदूषण मास्क हो जुन कुकुरहरूको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो। यदि तपाईं वन्य आगो, धुवाँ, धुलो आँधी वा अन्य दूषित पदार्थहरूले धम्की दिने ठाउँमा बस्नुहुन्न भने पनि, आपतकालिन अवस्थामा हात राख्नु तपाईंको घरपालुवा जनावरको स्वास्थ्यको लागि सरल बिमा हो।
के तपाईं कुकुरहरूको लागि हाम्रो एयर फिल्टर मास्कहरूको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ वा तपाईंलाई प्रश्न वा सरोकारहरू छन्? हामीसँग धेरै सहयोगी वेब पृष्ठहरू छन् जस्तै एकसँग बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू, सही आकार कसरी छनौट गर्ने, र कसरी आफ्नो कुकुरलाई प्रशिक्षण दिन उनको K9 मास्क लगाउन।
ढिलो सम्म प्रतिक्षा नगर्नुहोस् वा तपाईंको कुकुरले स्वास्थ्य समस्याहरू प्रदर्शन गर्न सुरू नगरे सम्म - K9 Mask® भ्रमण गर्नुहोस् र आज तपाईंको कुकुरको लागि एयर फिल्टररेशन मास्क अर्डर गर्नुहोस्!